अन्तिम सोमबार : ४ किमी घस्रदै तौलेश्वरनाथ महादेवमा पुगेर गरे जर्लापण – NepalDailyPost
नेपाल डेली पोस्ट २०७६, २७ श्रावण सोमबार १५:२४
अन्तिम सोमबार : ४ किमी घस्रदै तौलेश्वरनाथ महादेवमा पुगेर गरे जर्लापण
एजेन्सी, कपिलवस्तु । साउन महिनाको अन्तिम सोमवार श्रद्धालुहरुले ४ किमी घस्रदै गएर तौलेश्वरनाथ महादेव मन्दिरमा जर्लापण गरेका छन् ।
साउनमा गरिने भगवानको शिवको पुजाआजाबाट मनोकाक्षा पुरा हुने जनविश्वास रहेको छ । त्यसैक्रममा वाणगंगा नदीको रामघाटमा स्नान गरि शुद्ध भई विहानैदेखि सदरमुकाम तौलिहवा स्थित मन्दिरमा जर्लापण गर्दै पुजाआजा गर्नेको दिउसोसम्मै भीड थियो ।
श्रद्धालु आईतवार साझ नदी पुगेर जाग्राम बसेका थिए । उनीहरु रातभर भजन, चुट्का गर्दै जाग्राम बसेका थिए । राति २ बजेदेखि नदीमा स्नान गरि चोखिई बाटोमा पल्टदै घस्रदै श्रद्धालुहरु मन्दिर पुगेका थिए । लगातार घस्रन नसक्नेहरु ठाँउ ठाँउमा रोकिदै आराम गर्दै अघि बढेका थिए । स–साना नाबालकदेखि युवा, महिला पनि घस्रदै मन्दिर पुगेका थिए ।
घस्रदै जानेलाई ठाँउ ठाँउमा स्थानीयले नुहाई दिने गरेका थिए । घस्रदै जानेको दुःखकष्ट देखेर बटुवाहरु ढोक्दै सम्मान गरेका थिए ।
ठाँउठाँउमा घस्रदै जर्लापण गर्न जानेलाई नगरपालिकाको दमकलले पानी फालेर शितलता समेत प्रदान गरेको थियो । मन्दिर दर्शन गर्न १ किमी बढी लाईन थियो ।
४ किमी कालोपत्रे बाटो श्रद्धालु २ देखि ४ घण्टा लगाएर मन्दिर पुग्ने गरेका थिए । कपिलवस्तु नगरपालिका ५ सेमरीका १० वर्षे रमेश कोरी विहान ४ बजे घस्रदै नदीबाट हिडेर ८ बजे मन्दिर पुगेका थिए । कक्षा ६ मा पढने उनी मन्दिर पुगेर जलापर्ण गर्न सकेकामा आत्मशान्ति र सन्तुष्टि भएको बताए । ‘अघिल्लो वर्ष जर्लापण गर्ने ईच्छा थियो’ उनले भने, ‘तर सानो हुदा घरकाले जान दिएका थिएनन् ।
घस्रदै जानेलाई लोट बम भनिन्छ । उनीहरुसंगै सोमवार लोटबम गर्ने बालक, युवा देखि बृद्ध सम्म २ सय बढी श्रद्धालु थिए । साउन महिना शिवको महिना हो । साउने सोमवार निराहार बसी जल चढाए मनोकाक्षा पुरा हुने जनविश्वास छ । अन्तिम सोमवार हुदा भीड थामी नसक्नु थियो ।
नजिकको रुपन्देही, दाङ र अर्घाखा“ची सम्मका भक्तजन आएका थिए । त्यस्तै भारतको सिद्धार्थनगर, महराजगंज र बस्ती जिल्लाका समेत तीर्थालु समेत आएका थिए । सोमवार यहा एक लाख बढी भक्तजनले जर्लापण गरे । ६० प्रतिशत बढी महिला सहभागी थिए ।
तपाईंको आजको राशिफल / वि.सं. २०७६ भाद्र ०२ गते सोमबार
तपाईंको आजको राशिफल / वि.सं. २०७६ भाद्र ०१ गते आइतबार
PREVIOUS Previous post: खोलाले बगाउँदा ६६ वर्षीय वृद्धको मृत्यु
NEXT Next post: इन्द्रजात्रामा ४० देशका प्रतिनिधिलाई निम्ता